Onye Ntughari nke Hydraulic Cone - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>igwe nkuku nkume>> Hydraulic Cone Crusher
Mkpọpu nke Hydraulic Cone
edemede si: igwe nkuku nkume | oge: April 9, 2013 | Tag:igwe nkuku nkume	|
Crusher Hydraulic Crewher, Shanghai XSM bụ ngwá ọrụ na-ekpuchi ihe ọkụkụ, Hydraulic Cone Crusher, ihe ndị na-emepụta ngwá ọrụ, ndị na-emepụta ihe igwe na-ebugharị ígwè.Ore mining process, the first belt ebu, onye na-enye nri ọkụ, ihe eji ebu oku ezigara ya nkuku uhie, nkpọchi mmetụta, nnyeghari hydraulic bụ ihe na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke abụọ nke a obere jawcrusher, ihe na-esi ísì nyochaa nke atọ nke atọ na-ekpuchi jijiji na ihuenyo gbakwunyere nkọwa zuru oke nke ore ahụ na-eburu ya igwe mgbidi, igwe na-edozi Ngwọta nlekọta ọgwụ dị mma ndị na-arụ ọrụ magnet, igwe onu mmiri họrọ ọtụtụ ụdị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a, ọ bụ naanị ọrụ nhazi ọ bụla, Shanghai XSM dabere n'ụdị ụdị gị bụ ngwá ọrụ m kachasị mma, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ pịa aka nri akụkụ nke akara ngosi akara, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ịchọrọ gị azịza zuru ezu.
Mmiri mmiri na-eme ka mmiri gwọọ, nkume na-etipịa ígwè, bụ otu n'ime ihe e ji nkume mee ka a na-ejikarị eme ihe. Nrụpụta mmiri nke hydraulic cone na-eme ka ọkpụkpụ dị ka onye na-agbaji mgbatị, ma ọ nwere obere ụlọ na-ekpochapụ mmiri na ebe ọzọ dị n'etiti mpaghara agbaji. A na-ejikarị ihe nkedo hydraulic cone na-emekarị maka nrụgide siri ike dị iche iche nke siri ike nke na-agbajikwa ígwè na nkume. N'ihi ịrụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, arụpụta ọrụ dị elu, dị mfe iji gbanwee na obere ụgwọ ọrụ, nnyefe mmanụ ụgbọ mmiri anyị, na ọtụtụ ụlọ ọrụ, dị ka igwe na-arụ, ụlọ, ọrụ okporo ụzọ, ụlọ ọrụ kemịkal nwere ezigbo ngwa. Dị ka onye na-emepụta ngwá ọrụ a ma ama na onye na-ebu ígwè na China, ọ bụghị nanị na anyị na-emepụta ihe dị iche iche na hydraulic cone crush, na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche nke hydraulic cone crusher iji gboo mkpa dị iche iche gị.
Atụmatụ na nka na ụzụ:
Ngwá ọrụ nke HP nke ọma ịrụ ọrụ nke ọma bụ Hydraulic Cone Crusher nwere arụmọrụ ka mma iji tụnyere nsị mmiri cone na ndị nkịtị Hydraulic Cone Crusher:
1. Nnukwu nchịkọta dị elu na mmepụta arụmọrụ.
- Njikọta ọsọ ọsọ na ọrịa strok elu na-eme ka ike gọọmenti na ikike ikike na-agafe dịwanye mma nke ukwuu ma gbasie ike na ikike mụbaa.
2. Obere ihe oriri na obere ọrụ na-efu.
- usoro nchikota nke aka na data ntanetị, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ụgwọ ọrụ dị ala. Akụkụ nile nke crusher nwere nchebe na-egbochi, nke nwere ike ime ka oge ndụ nke akụkụ ndị ọzọ na-amụba site na 30% na ụgwọ nkwụsị na-ebelata. Onye na-eti nri na-ezere ọghọm dị nhịahụ dịka nbibi dị oke ala, oke ume ike, ngwa ngwa ngwa nke ihe nkedo, ihe nkedo ihe na efere.
3. N'agbata-akwa na-agbasi ike na-etipịa ma kwụchaa ụdị ọdịdị.
- Onye nkpochapu na-eme ka okpukpu ala na-agbaso ụkpụrụ na-ebibi ihe na ọsọ ọsọ na-adaba adaba, ọ bụghị nchịkọta otu ihe nchịkọta nke otu. Oghere ndị nwere ike ịkụda ihe nwere ike imepụta ihe ndị na-emepụta ihe na crusher, ya mere ọnụahịa nke ngwaahịa dị mma na ngwaahịa nke ọdịdị cubic na-amụbawanye ma ngwaahịa nke oke aka na-ebelata.
4. Nchebe hydraulic na nhichapụ hydraulic clearing, oke arụmọrụ na obere nkwụsị mmepụta na ịrụzi oge.
--Emeghe ihe mgbakwunye site na ngwaọrụ hydraulic na nchedo n'elu ka eme nke nkwekpu ji abawanye, nhazi na ime ihe dị mfe karị, ịrụzi oge dị mkpụmkpụ .; ihe ngwongwo a na-eme ka mmiri gwọọ na-eme ka ụbụrụ gafere site na nkwụsị na-eme ihe mgbe ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ngwaọrụ hydraulic na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ígwè na-ebugharị ma na-ebugharị ngwa ngwa, ya mere ọ dịghị nsogbu ịkwụsị kuki iji wepụ ihe onwunwe.
5. Esi mmanu mmanụ na-eme ka oge ndụ dịkwuo elu.
- Nlekọta nke usoro usoro mmanu mmanu nke oma na - eme ka oge ndu nke kpochapu, nke kachasi elu ma ghara ikpochapu uzuzu nke ihe ndi ozo di ka ngwakọta nke mmanu na mmiri n'ime mmiri n 'onu mmiri.
6. Ebe uzo di egwu.
- Naanị ihe dị mkpa na-agbanwe agbanwe na cone linking na ụgbọ mmiri na-ebugharị cone; , a ga-agbanwe ụdị uzo a na-agbaji ya site na oghere dị nro na-adị mkpụmkpụ, nke nwere ike izute ụdị dị iche iche nke chọrọ.
7. Ndozi na ime ihe nfe.
- akụkụ ọ bụla nke usoro HP nke crush cone nwere ike ikpokọta, gbasapụ ma rụzie site n'elu na akuku akụkụ, gụnyere cone na cone. Ọ bụrụ na ọ gbanwee, ọ dịghị mkpa ịkwasa ozu ahụ na-ekpo ọkụ ma mechie ihe mkpuchi ahụ. Mkpụrụ ụgbọ elu hydraulic na-eme ka ọrụ nkedo dị mma karị.
8. Ngwusi nri nwere ike inye ndị ahịa ohere ka ukwuu, ụdị ọdịdị dị mma, na ọrụ dị mfe.
Nkà na ụzụ nkọwa nke ọkpụkpụ kpụkọrọ akpụkpọ ụkwụ
model Max. Nri Ugboro
(Mm) Min. Ịkwụsị Nwepu
(Mm) adiana Speed
(r / m) ntụ ntụ
Rịba ama: Nkọwapụta a bụ naanị nkọwa, mgbanwe ọ bụla dị n'okpuru nnukwute mmanụ cone ngwaahịa.
← Onye Ntughari
Nnukwu nrụgide Mkpochapu na-ebugharị mmiri →